fahitana marani-tsaina EQ fortwo, izao no fahitan'i Daimler ny hoavin'ny 'carsharing' | Vaovao momba ny gadget
Misy orinasa maromaro mandrafitra ny kaominin'i Daimler. Mercedes-Benz sy smart dia roa amin'izy ireo. Ity farany dia te hanolotra amin'ny 12 septambra, ny fahitany manokana an'i fizarana fiara. Izy io dia modely vaovao vaovao mahaleo tena sy elektrika feno mitondra ny anarana fahitana marani-tsaina EQ fortwo.
Ny hany zavatra itovizany amin'ireo maodelin'ny orinasa dia ny habeny: ity kinova elektrika sy mizaka tena ity dia manodidina ny 2,7 ​​metatra. Ho fanampin'izay, io no hevitra voalohany azo jerena fa ao anatiny dia misy tsy fisiana roa lehibe: tsy manana pedal izy ary tsy misy familiana.
1 Hevitra vaovao momba ny 'carsharing'
2 Miaraka amin'ny fahitana maranitra EQ fortwo dia ianao no Michael Knight amin'ny ho avy
3 Manolotra vaovao any ivelany amin'ny alàlan'ny chassis
Hevitra vaovao momba ny 'carsharing'
Ny fahitana marani-tsaina EQ fortwo dia iray amin'ireo Modely 10 hapetrak'i Daimler amin'ny famokarana ny sehatra EQ, anisan'izany ny fiara sy SUV. Fa ny mifantoka amin'ity maodely ity dia afaka milaza aminao izahay fa mampiavaka azy ny endriny. Azo antoka fa ilay singa izay namidy tamin'ny farany dia nanome kely momba ity modely ity. Saingy tsy azontsika lavina fa nahasarika ny saintsika ny fampitaovana rehetra ao aminy.
Ny zavatra voalohany holazainay aminao dia natao ho azy izany fizarana fiara na fiara nizara. Midika izany fa ireo sehatra ireo toa ny car2go izay efa ananan'ny smart dia misy fiaramanidina kely misy herinaratra. Ary izany dia araka ny angon-drakitra navoakan'ity orinasa ity izay ianteheran'i Daimler noho ny tolo-keviny fatratra. Araka ny voalazan'ny Car2go isaky ny 1,4 segondra dia fiara avy amin'ny fiaramanidina no ampiasaina. Manana mpanjifa 2,6 tapitrisa izy amin'izao fotoana izao, saingy miaraka amin'ity tolo-kevitra ity dia kendrena hahatratra quota ho an'ny mpampiasa 36 tapitrisa amin'ny 2025.
Miaraka amin'ny fahitana maranitra EQ fortwo dia ianao no Michael Knight amin'ny ho avy
Etsy ankilany, araka ny nolazainay taminao, izany fahitana marani-tsaina EQ fortwo dia tsy manana kodiarana na pedal. Ka handika amin'ny habakabaka anatiny kokoa ho an'ireo mponina izany. Ho solon'ireto fitaovana ireto dia napetraka ny efijery afovoany 24-inch lehibe ho an'ny fialambolin'ireo mpizahatany - afaka hipetraka amin'ny mpandeha miisa 2 izy io - ary efijery hafa 4-inch roa.
Mandritra izany fotoana izany, eo ivelany sy eo aloha, ny fahitana marani-tsaina EQ fortwo dia mankafy ihany koa tontonana LED 44-inch. Ity dia hohajain'ny mpanjifa tanteraka. Ary ny iray amin'ireo tombony hafa amin'ity fiara mizaka tena ity dia izy irery no afaka mandeha mitady ny client. Ny mpampiasa ny fizarana fiara Mila mampandre fotsiny ianao fa mila ny serivisy amin'ny alalanao finday avo lenta na takelaka, tsotra izany. Izany hoe, Ho Michael Knight sy KITT maoderina isika.
Manolotra vaovao any ivelany amin'ny alàlan'ny chassis
Saingy amin'ny fanolorana fampahalalana bebe kokoa momba ity efijery goavambe ity eo alohany, dia afaka mampiseho fampahalalana ilay fiara. Ohatra vitsivitsy amin'izany: ny anaran'ny mpanjifa raisinao; ny adiresy halehanao na manolotra fampahalalana mahaliana an'ireo mpandeha an-tongotra. Ary koa, ny jiro ao ivohon'ny fiara dia afaka manome fampahalalana ivelany ihany koa. Izy ireo dia mety ho avy amin'ny fampandrenesana ka hatramin'ny fampahalalana momba ny fanjakan'ny fifamoivoizana.
Mikasika ireo olana ara-teknika misimisy kokoa, ity fahitana marani-tsaina EQ fortwo ity dia ampiasain'ny bateria lithium 30 kWh azo havaozina. Tsy fantatsika mazava ny fizakantenany. Saingy ny tombony iray hafa amin'ity foto-kevitra ity dia rehefa tsy misy herinaratra na mamarana serivisy ny singa iray, dia izy irery no hitady tobim-piantsenana ary hanomboka hampandeha ny herin'ny bateriny. Ahoana no ahafahana mampifandray amin'ny tamba-jotra elektrika fotsiny? Eny, satria tsy mila plug ianao. Ireo tobin-kazo fiampangana dia hasiana hobs fampidirana amin'ny tany; izany hoe tsy mila tariby hampandeha azy io.
Farany, lazao aminao fa ny hendry dia nieritreritra ny zava-drehetra. Ary ny fiarovana ny làlana dia iray amin'ireo lohahevitra voatonona indrindra amin'ity fahitana maranitra EQ fortwo ity. Midika izany fa ny lafiny toy ny rafitra fanokafana varavarana vaovao dia nokarakaraina fatratra. Samy mikorisa sy mihodina manodidina ny famaky aoriana manome endrika futuristic. Ho fanampin'izany, ity rafitra ity dia manamora ny fidirana ary mamonjy toerana. Ary koa, raha tsy manokatra amin'ny fomba mahazatra, dia tsy atahorana ny hifandona amin'ny fiara hafa na bisikilety.
Fampahalalana bebe kokoa: Daimler
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » fahitana marani-tsaina EQ fortwo, izao no fahitan'i Daimler ny hoavin'ny fiara fitateram-bahoaka
MINI Electric Concept, topi-maso ny maodely elektrika hiseho amin'ny taona 2019